Ny processeur A7 an'ny iPad Mini Retina dia mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny an'ny iPhone 5s | Vaovao IPhone
Ny fanapahan-kevitr'i Apple hampiasa ilay mpikirakira azy ao amin'ny iPad Mini Retina sy ny iPad Air dia nankasitraka ny maro (tafiditra ao amiko). Ary farany, ny iPad Mini dia tsy takelaka "lafo vidy" intsony, misy fampiasa vitsy noho ny fitaovana natomboka tamin'ny herintaona. Ny fanontaniana nijanona teny amin'ny habakabaka ary tsy azontsika fantarina raha tsy ny fandefasana azy raha toa ka miasa amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny processeur A7 an'ny iPhone 5s na an'ny an'ny iPad Air, ary ny valiny dia efa fantatra androany avy amin'ny Geekbench, ilay fampiharana fanta-daza indrindra hanatanterahana benchmarks amin'ny fitaovantsika: ny iPad Mini retina dia miasa amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny iPhone 5s.
¿Inona no vokatr'izany eo amin'ny fampiasana isan'andro ny fitaovana? Tsy misy, raha tsy hoe mahatsapa ny mpampiasa. Ny zava-misy fa ny iPad Mini dia mizara ny hafainganam-pandehan'ny processeur toy ny iPhone 5s dia misy dikany, satria kely kokoa ny bateria ary tsy dia misy velarana ny faritra hampihena ny hafanana noho ny iPad Air mahery vaika rehetra. Ireny fiovana kely ireny dia izay manongotra ireo mpanamboatra avy amin'ny tanany mba hahatratrarana fahombiazana tsara indrindra amin'ny fitaovany ary hahatratra ny fifandanjana lehibe indrindra eo amin'ny herinaratra sy ny fanjifana.
Ny fanapahan-kevitra eo amin'ny fisafidianana ny iPad Air sy ny iPad Mini dia sarotra kokoa: fitaovana mahery vaika mitovy, fizakantena tokana, fahasamihafana lehibe eo amin'ny efijery sy ny vidiny. Sarimihetsika fanaovana sorona hahafahana mitahiry euro be dia be? Miaraka amin'ny famolavolana ny iPad Air vaovao, izay mahatonga azy hitovy amin'ny iPad Mini, somary lehibe kokoa sy mavesatra kokoa (nefa kely), ary ny famaritana ny iPad Mini, narahina tamin'ny iPad Air, sarotra ny mahafantatra hoe iza no ny fanapahan-kevitra tsara indrindra. Iza ny anao?
Fampahalalana bebe kokoa - Ny benchmarks voalohany amin'ny iPad Air dia mampiseho fampisehoana 90% bebe kokoa noho ny iPad 4
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny processeur A7 an'ny iPad Mini Retina dia mandeha amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny an'ny iPhone 5s